कोभिड- १९ : पछिल्लो समय उब्जिएका केही प्रश्न
Wednesday,08 July, 2020 | २४ असार २०७७
घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, ५ जेठ
अहिले कोभिड- १९ को आतङ्क पछिल्लो खतरनाक वैज्ञानिक आतङ्क (उपलब्धि?) परमाणु आतङ्कभन्दा कैयौँ गुणा भयानक र त्रासद बनेको छ । परमाणु हतियारका बलमा विश्वलाई थर्कमान बनाइरहेका सम्पन्न र शक्तिशाली भनिएका मुलुक पनि एउटा तुच्छ विषाणुका कारण निरीह बनेका छन् ।
गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)ले आजसम्म विश्वका प्राय: सबै स्थानमा आक्रमण गरिसकेको छ । यसकै कारण सम्पूर्ण विश्व नै घोषित/अघोषित लकडाउनको अवस्थामा छ । संक्रमण भुसको आगोझैँ फैलिँदो क्रममा छ । हालसम्म उपचारको उपाय पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा यसको उपचार भनेकै आराम, सतर्कता, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनु मात्र देखिन्छ ।
सुरुमा कमजोर, दीर्घ रोगी र वृद्ध-वृद्धालाई बढी खतरा बनेको कोभिड- १९ ले अहिले भर्खर जन्मिएको शिशु, जवान र वृद्ध, सबैलाई उत्तिकै दु:ख दिएको छ ।
यस आलेखमा कोभिड- १९ र नेपालको अवस्था अनि केही प्रश्नबारे चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
नेपालमा गत माघमा पहिलो संक्रमण देखियो । त्यसपछि लामो समय अत्यन्त सुस्त गतिमा, अत्यन्त कम संख्यामा संक्रमण देखियो । तर, २ साताअघिदेखि यो क्रम अप्रत्यासित बढ्यो र आजसम्म आउँदा एकै दिन ६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो । यो बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।
विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमाबाट नेपाल भित्रिनेहरूमा बढी मात्रामा संक्रमण देखिइरहेको छ । तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरू संक्रमणको अत्यन्त बढी जोखिममा छन् ।
'मर्नका लागि पनि घर आउने' हुटहुटीका कारण भारतमा रहेका नेपाली जोखिम मोलेरै नेपाल आएका छन् । तथापि, नेपाल-भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको समझदारीमुताबिक २ देशमध्ये जुन देशमा एकअर्का देशका नागरिकमा संक्रमण देखिए पनि सोही देशले उक्त संक्रमितको उपचार गराएर मात्र उसको देशमा फर्काउने भनिएको थियो । तर, त्यसो भएन र १५ दिनसम्म पैदल हिँडेर यो उखर्माउलो गर्मीमा नेपाल छिरेका १ युवकको हिजो मात्र नेपालगञ्जमा क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भयो ।
उक्त युवकको मृत्युका पछाडि केही प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेका छन् । जस्तो कि : ती युवकलाई भारत सरकारले किन सम्झौताअनुसार उचित परीक्षण र उपचारका उपाय नगरी नेपाल आउन दियो ? नेपाल आउन्जेल १५ दिनसम्म भारत र नेपालकै धेरै स्थान हुँदै आएका हुन् ती युवक, तब किन उनको निगरानी भएन ? किन भारतले आँखा चिम्लिएर नेपाल छिर्न दियो ?
यसरी नै नेपाल आइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा उनको हेरचाह उचित नभएको कसरी पुष्टि हुन्छ भने, उनले कुनै लक्षणविनै वान्ता र पखाला लागेकै कारण मृत्युवरण गरे । यहाँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ- लामो समय पैदल हिँडेर आएक व्यक्तिमा शारीरिक/मानसिक सिथिलता हुन्छ नै, त्यसमाथि उनी पहिल्यै वा भारतमा छँदै संक्रमणको सिकार भएका रहेछन् । संक्रमितमा उसै पनि प्रतिरोधी क्षमता ह्रास भइसकेको हुन्छ र लामो पैदल यात्राले अझ कमजोर बनाउँछ ।
यस्ता व्यक्तिको निगरानी र हेरचाह निकै गम्भीरतापूर्वक हुनुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन । विज्ञहरूका अनुसार उनमा जलवियोजन वा डिहाइड्रेसन भएको हुन सक्ने, क्वारेन्टाइनको खाना, वातावरणीय आदि व्यवस्था उचित नभएको हुन सक्ने र उचित 'केयर' नभएको हुन सक्ने आशंका पनि बलियो नै छ ।
त्यसको १ दिनअघि वा अस्तिको दिन मात्र अर्की १ जना सुत्केरी महिलाको निधन भयो । ९ दिनकी सुत्केरी ती महिलामा शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा प्रसूति हुँदासम्म सबै अवस्था सामन्य हुनु तर सिन्धुपाल्चोक फर्किएको केही दिनमै समस्या देखिएर तत्काल मृत्यु हुनुले पनि केही प्रश्न उब्जाएको छ ।
उनको मृत्यु भइसकेको र पीसीआर पोजिटिभ देखिएको पुष्टि गरिसकिएको अवस्थामा अब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार उनको मृत्युको मुख्य कारण कोभिड- १९ नै मानिँदोरहेछ- सैद्धान्तिक आधारमा । तर, हामीले सैद्धान्तिक आधारलाई भुलिदिने हो भने उनीमाथि अन्याय भएको भन्न सकिने केही आधार छन् ।
जस्तो कि- प्रसूतिका क्रममा नै अस्पतालले पीसीआर जाँच गर्नु जरुरी थियो किनभने यति ठूलो रूप लिइसकेको कोभिड- १९ को संक्रमणप्रति अब हरेक अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी सजग र सचेत हुनुपर्थ्यो । यदि यसरी उनको कोभिड- १९ परीक्षण गरिएको भए उनी अहिले स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा आइसोलेसनमा हुन्थिन् । एउटा ९ दिने अबोध शिशुले ममता र प्यार गुमाउनुपर्ने थिएन भने एउटी यौवना महिलाले लाऊँलाऊँ खाऊँखाऊँको उमेरमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन ।
यसबेला प्रश्न यी २ केसमा मात्र उठेका छैनन्, दिनहुँ, अझ छिनछिनमा बढिरहेको संक्रमितको संख्याका बीच निको भएर फर्किनेको संख्या रोकिनुमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
के गर्दै छन् ३६ जना, जो निको भएर घर फर्किए, तीबाहेकका आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित ? किन निकै दिनदेखि निको भएर घर फर्किन सकेका छैनन् १ जना पनि ? आधिकारिक अवस्था के छ उनीहरूको ? कुनै यथार्थ जानकारी सम्बन्धित निकायले गराएको छैन ।
यसरी नै, जहाँ जति पनि क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएका छन्, ती संक्रमित र आशंकितका लागि बस्न उपयुक्त नभएका खबर र गुनासा आइरहेका छन् । अत्यन्त साँघुरा, पूर्वाधारविहीन, खानेपानी र शौचालयको समेत उचित व्यवस्था नभएका, गर्मीको यसबेलामा हावाका लागि उचित प्रबन्ध नभएको, खानामा भाँती नपुगेको गुनासा व्यापक छन् ।
यही कारण कपिलवस्तुबाट क्वारेन्टाइन बसेका केही व्यक्ति भाग्ने कोसिस गरेको खबर पनि आएको छ । यसमा पहिलो जिम्मेवार स्थानीय सरकार नै हो । 'गाउँगाउँमा सिंहदरबार' भनेको राजधानीका हरसुविधा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने भनेको पनि हो ।
अहिले हरेक स्थानीय तहसँग केही हजार मानिसका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बनाउने र उनीहरूलाई राम्ररी हेरचाह गर्ने, खुवाउने, सुताउने र उपचारसमेत गराउने आर्थिक/भौतिक सामर्थ्य छ । तर, किन उदासीन छन् स्थानीय सरकारहरू यस विषयमा ।
अनि यही अव्यवस्थाका कारण, स्थानीय तहको सानो सक्रियता र लगानीको लोभका कारण बचाउन सकिने मानिसहरू फटाफट मर्न थाल्नु निकै दुखद हो ।
उसो त, केन्द्रीय सरकारको यस विषयमा पहल कदमी पनि सकारात्मक र प्रभावकारी देखिँदैन । यस समय केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई आवश्यक प्रभावकारी क्वारेन्टाइन/आइसोलेसन व्यवस्थापन र पीसीआर टेस्टका लागि निर्देशन, सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर, यसो हुन सकेको पाइँदैन ।
केन्द्र सरकार लकडाउनमै कोभिड- १९ को नियन्त्रण र उपचार देखेर बसेको छ । तीव्र र व्यापक पीसीआर परीक्षणमा चासो दिएको छैन । कतिसम्म भने, सर्वसाधारणले पीसीआर टेस्ट गराउन सक्ने अवस्था छैन अहिले । निकै ठूलो सोर्स र दबाब लगाएर मात्र पीसीआर टेस्ट हुन सक्ने अवस्था छ । यस्तोमा कसरी तीव्र र व्यापक परीक्षण सम्भव छ ?
लकडाउन भाइरस फैलिन नदिन एउटा उपाय अवश्य हो तर यो कोभिड- १९ नियन्त्रणका लागि सबैथोक होइन, उपचार होइन । यसर्थ, लकडाउनसँगै सीमानाकामा कडा निगरानी, सीमाबाट प्रवेश गर्नेलाई कडाइपूर्वक सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आन्तरिक लकडाउनलाई कम्तीमा १५ दिन कर्फ्यू स्तरमै कडाइ, धेरैभन्दा धेरैको पीसीआर टेस्ट, आमसर्वसाधारणको पीसीआर टेस्टमा सहज पहुँच आदि तुरुन्त गर्नुपर्ने कार्यका रूपमा देखिन्छन् ।
यी काम गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार जिम्मेवारीपूर्वक समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यससँगै कम्तीमा २ साता सबै स्थानीय तहहरूमा पूर्णत: आवतजावत बन्द गर्नु पनि राम्रै हुनेछ । यसो गरिएमा संक्रमणको तीव्र फैलावट स्वाट्टै रोकिनेछ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७, २१:०९:००
सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या ३८ सय नाघ्यो, बुधबार ६९ जनामा पुष्टि
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयले भन्यो : कोरोना परीक्षणको शुल्क नलिनू
परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट पोजिटिभ, कसरी ?
खड्गप्रसाद ओलीका पक्षमा
नेकपा झगडा : ओलीलाई सकस कि प्रचण्डलाई अवसर ?
डा. विमल कोइराला: ज्ञानेन्द्रसँगै ३ प्रधानमन्त्री झेलेका स्रष्टा प्रशासक
श‌ंकर कोइराला : शाखा अधिकृतदेखि मन्त्रीसम्म